kowinmyooo: ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ viber sticker တွေ မခိုးပဲအလကားထည့်ရအောင်
ရောက်လာသူအပေါင်း စိတ်ချမ်းမြေကြပါစေ… အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ တောင်းဆုပြုလျှက် kowinmyooo.blogspot.com
ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ viber sticker တွေ မခိုးပဲအလကားထည့်ရအောင်
ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ viber stickerတွေ မခိုးဘဲ အလကားရတာဗျ root ရှိဖို့နဲ့ root explorer တော့လိုပါတယ်။
အရင်ဆုံးဖုန် setting ထဲသွား app ထဲက viber ကိုနှိပ် force stop တစ်ခုပဲနှိပ်ထွက်ခဲ့ပါ။ဒေါင်းထာ
းတဲ့zip file လေးကိုဖြည်ဖို့ easy rar လေးတင်ထားပါ။ ပြီးရင် viber အတွက်ဒေါင်းထားတဲ့ file လေးပေါ်ဖိ extract here နှိပ် okနှိပ် ရပီ။root explorerဖွင့် sd card ကိုဖွင့် ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ browser ထဲကစောစောကဖြည် ထားတဲ့ folder ကိုဖွင့် fileလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကိုအရင်ဖိထား copy နှိပ် back တွေနဲ့ပြန်ထွက်သတိထားထွက်ပါစဖွင့်ဖွင့်ချင်းနေရာထိပါ။data / data/ com.viber.voip /databases ထဲသွား paste နှိပ် okသာပေး back ပြန်ထွက် sd card.ထဲက နော် file လေးတစ်ခုကိုအပေါ်ကအတိုင်းပြန်ထည့်ပါ။ ပီးပါပြီ။ viber ဖွင့်လိုက်ပါ။ sticker နေရာမှာအဝိုင်းလေးတွေလည်နေပါလိမ့်မယ် ။စောင့်လိုက်ရင်okသွားပါပီ။
Posted by Ko Myo at 8:47 AM
ကိုဝင်းမျိုးဦး မှ မေတ္တာပို့သလိုက်ပါ၏ ကျန်းမာချမ်းသာလို့ အစစအဆင်ပြေကြပါစေ
Google ရဲ့ Gmail Storage ရှိတဲ့ နေရာ
Video Chat in Gmail
ပို့လိုက်တဲ့မေးလ်ကိုဖတ်ပြီး / မပြီး..သိချင်ရင်.......
Connection ကျနေစဉ် Gtalk,Gmail ဖွင့်နည်း
password တွေက လုံခြုံမှုရှိလားမရှိဘူးလား
G730-U00 Build Number 135 Root !
” Huwei G730-U00 & G730-C00 ” Update Firmware
MM Aio Font Changer v1.0 (Android Version 1.6 မှ 4...
Google Playstore installer apk !
MMSD Smart Zawgyi v1.5 (Stable)
ဖုန်းအားလုံးအတွက် GMail,Gtalk,Playstore သွင်းရန် A...
Y535-C00 Unlock Bootloader, Auto Root & Myanmar Fo...
4.2.1 MMSD Google App Installer
Samsung SCH-I619 Root လုပ်လို့ရပြီ ။ Root Master.a...
G6-C00 Auto Root & Myanmar Font Installer
Android 4.1 အထက်တွေအကုန် မြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်လို့...
Y511 မြန်မာစာအဆင်ပြေတဲ့ MMSD Smart Zawgyi v1.3 လာပ...
Y535-C00 Root & MM Font installer Version 1.0
4.3 MMSD Gapp Installer(Gtalk,Gmail,Playstore သွင်...
Myandroid v1.4 (Myanmar Android Service Tool)
Huawei Y511 Firmware တင်နည်း..
စောမွန်လှ အလွမ်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ခရီးစဉ်က...
All Android Drivers
Y511-T00 and U00 Firmware နှင့် တင်နည်းများ
Root Apk များစုစည်းမှု
Android ဖုန်းအားလုံးအတွက် Recovery Mode ၀င်နည်း
SD Card Slot ပျက်နေတဲ့ Huawei Phone တွေ Firmwareြ...
Huawei C8815 B135 Official Firmware Update
Huawei Acsend G730-T00 B121 Official Firmware
Huawei Ascend-P1 U9200 Firmware
Huawei Ascend G610 Official Firmwares
Huawei Ascend Mate Firmware
Huawei Y210.2011 Firmware
English Grammar Book ( for Android )
Android Phone များကို Internet Setting(GSM Only)
Firefox ကို မြန်အောင်လုပ်ကြည့်ရအောင်
Huawei Latest Firmwares !
Driver ပေါင်း သိန်း၄၀ကျော်ပါဝင်တဲ့ - Driver Naviga...
★★ ESET NOD32 Antivirus 7.0.317.4 Final (32bit / 6...
Kaspersky Keys ထည့်နည်း ၂ နည်း
★★ All AntiVirus Product Key Finder 2014 v1.0 ★★
နေ့စဉ် Kaspersky keys များ (5 Feb 2014)
Facebook Accounts hack နည်း အကောင့်ဟတ်နဲ့နော်
1GBကတ်ကို 2GB အဖြင့် ပြောင်းမယ်
Windows7ကို USB Drive ဖြင့်အလွယ်တကူတင်နည်း
CD or DVD Drive Missing (CD/DVD Drive မပေါ်တဲ့ပြဿနာ...
CD/DVD Driver ပြောက်နေရင်
Windows 8 Loader For Activation
CoolPad 5217 ကို Root လုပ်စရာမလိုဘဲ မြန်မာစာ ထည့်န...
ရှမ်း-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ဘာသာသုံးများ ရိုက်နိုင်တဲ့ Ch...
Android Devices အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီစေတဲ့ PDAnet ADB...
Huawei G606 Drivers
Samsung 4.2.2 နှင့်အထက်တွေအတွက် မြန်မာစာမှန်ကန်အော...
Huawei G606-T00 B 021 Official Firmware
Everimaging Photo Effect Studio Pro v4.1.3 Incl Re...
Android Themes များ
ကိုဝင်းမျိုးဦး နည်းပညာစုစည်း မျှဝေခြင်း
ကိုဝင်းမျိုးဦး နည်းပညာ စုစည်းမျှဝေခြင်း
ဘလော့မှာ Mp3 Player ထဲ့ နည်း
Youtube ကို မထစ်မငေါ့ပဲဖြောင်ဖြောင့်တန်းတန်းကြည့်န...
ဓာတ်ပုံဒီဇိုင်းလှလှတွေ လုပ်ပေးချင်ရင် ဆော့ဝဲကောင်း...
သင့် facebook အကောင့် ဟက်ခံရပြီးဆိုရင်
Wi-Fi scanning software (inSSIDer for Home 3.0.7)
★★ Cyberlink Power Director ဖြင့် ကာရာအိုကေ သီချင်...
Firmware Download Link များစုစည်းမှု
တစ်ရက်အတွင်း Facebook မှာ Friend တွေ အများကြီးရအော...
WebcamMax 7.8.4.2 Multilingual With Patch and keyg...
Firefox Bookmark မှာမှတ်ထားတာတွေပျောက် မသွားအောင်
ဘလော့မှာ Error 400 တက်လာတာကို ဖြေရှင်းကြမယ်...နော်...
♪ Viber ကို တခြားနိုင်ငံ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဝင်ရောက်...
ကိုဝင်းမျိုးဦး နည်းပညာ စုစည်းခြင်း
Zawgyi Font & Keyboard (32bit & 64bit)
Wifi ကို သေချာပေါက်ဟက်လို့ရတဲ့နည်းလေးပါ
အင်တာနက်ပေါ်ကနေ မြန်မာစာတမ်းထိုး နိုင်ငံခြားကားတွေ ...
တစ်ချိန်တည်း တစ်ထိုင်တည်း နဲ့ Facebook Account ပေ...
Computer မလိုပဲ Android ဖုန်းထဲမှာ Root လုပ်နိုင်တ...
ကိုဝင်းမျိုးဦး မှတ်သားထားသော နည်းပညာ မှတ်စုများ
Welcome To ကိုဝင်းမျိုးဦး
မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပီးသွားရင် အေးမြတဲ.လေပြေလေညင်းပြန်လာသလို ပြန်ဆက်မရတဲ. သိက္ခာနဲ့မာန ကြားမှာ ပြေလည်မှုကရောဝင်ရောက်လာပါ့မလား ယုံကြည်မှုနဲ.တည်ဆောက်ထားတဲ.အချစ်ဟာ သံသယဆိုတဲ. ကြိုးတစ်ချောင်းဝင်ရောက်လာရင် ဆက်ဆံရေးဆိုတဲ.စည်းက ပျက်တောက်သွားမှာပဲ သံယောဇဉ်ဆိုတဲ.အရာကလဲ တင်းလွန်းရင်ပျက် လျော့လွန်းရင်ပတ်သွားမှာပဲ မလျော့မတင်းလေးနဲ. ဆက်ထုံးတွေရှိလဲပဲ နားလည်မှုဆိုတဲ.အရာလေးနဲ. တို.နှစ်ယောက်ရဲ.ဆူးခယောင်းလမ်းကို အကာရံတားဆီးတွေရှိလဲပဲ တောင်တန်းကြားမှာရှိတဲ.စမ်းချောင်းလေးလို ဘေးဘက်မှာကာရံတားဆီးရှိလဲ အထိန်းကွပ်လေးပေးပီး... ပန်းလေးတွေကြဲပီး တစ်ငြိမ်.ငြိမ်.နဲ. လျှောက်လမ်းကြစို.။......
တကယ်ချစ်ပါသော်လည်း ခွဲရခြင်း အကြောင်း ဘယ်တော့မှ မခွဲကြေးလို့ ကတိပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲ တစ်ခု အမေရိကန် မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောင်လေးကလည်း ကောင်မလေးကို ချစ်သလို၊ ကောင်မလေးကလည်း ကောင်မလေးကို သိပ်ချစ်ရှာသတဲ့။ သို့ပေမယ့် ကောင်လေးဟာ အလုပ်သိပ်အဆင်မပြေရှာပါဘူး။ ကုမ္မဏီ တစ်ခုမှာ ရိုးရိုးဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝအကြောင်း စဉ်းစားတဲ့အခါ ချစ်သူကို လက်ထက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ သူ့အတွက် အခဲယဉ်းဆုံး အလုပ် ဖြစ် ပါတယ်။ ချစ်သူဘက်ကလည်း လမ်းခွဲ စကား စဆိုပါပြီ။ လမ်းခွဲ စကားရယ်လို့ တိုက်ရိုက် မသက်ရောက်ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့ ရအောင် ဝေးရမယ့်အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့ ကိုသွားပြီး တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ အတွက် ကောင်မလေး က ဆိုပါတယ်။ ပညာသင်ဆု ရရှိထားတဲ့အတွက် တက္ကသိုလ်ပြီးရင်တောင် ပဲရစ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပြီး ဘဝကို အဆုံးသတ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ဆိုလာပါတယ်။ ကောင်လေး မငြင်း နိုင်ပါဘူး။ ချစ်သူအတွက် လုံလောက်တဲ့ ဘဝ တစ်ခု မဖန် တီးနိုင်သေးတော့ လက်တလောတော့ လမ်းခွဲဖို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ချစ်သူအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ခေါက် ထားတဲ့ စက္ကူကြယ် တစ်ထောင် ပါတဲ့ ဗူးလေး တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါ တယ်။ လမ်းခွဲပြီး ဘဝကိုနာကျည်းတဲ့ ကောင်လေးက အလုပ်ကြိုးစားပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ ပညာဆည်းပူးရင်းနဲ့ ၃ နှစ်အတွင်း အံ့မခန်းကြီးပွားလာ ပါတယ်။ အများကြီး သိပ်မဟုတ်တောင် ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ဒို၊ ကိုယ်ပိုင် ကုမ္မဏီငယ်လေး တစ်ခု စထောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက် ရှိသွားပါတယ်။ စိတ်ကော၊ နှလုံးသားထဲမှာပါ သူ့ချစ်သူအတွက် နေရာ ချန်ထားဆဲမို့ အချစ်ရေး လုံးဝမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ တစ်နေ့တော့ မိုးရွာထဲမှာ ကားမောင်းရင်း သူ့ချစ်သူဟောင်းရဲ့  မိဘ နှစ်ဦး လမ်းလျှောက်နေတာကို တွေ့သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့လက်ရှိအနေ အထား ကို ပြောပြီး သမီးနဲ့ သဘောတူစေလိုကြောင်း စကားလက်စုံပြော ဖို့ ခေါ်မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ချစ်သူ မိဘ နှစ်ဦးက သင်္ချိုင်း တစ်ခု ထဲ ဝင်သွားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ သင်္ချိုင်းထဲ ထိလိုက်ဝင်ကြည့် လိုက်ချိန်မှာတော့ အုတ်ဂူ တစ်ခုမှာ သူ့ချစ်သူ အပြုံးမျက်နှာနဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခု တင်ထားတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ သူနားလည်သွားပါပြီ။ ဖြစ်ပုံအကြောင်းစုံ သိဖို့ ချစ်သူ မိဘဆီမေးပါ လိုက်တဲ့ အခါ- ကင်ဆာရောဂါကြောင့် သူမ ဆုံးသွားတာ ၁ နှစ်ရှိပြီ။ ကောင်လေးအပေါ် သူတကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သူပေးတဲ့ ကြယ်ဗူးလေးဟာ ဆေးရုံမှာ တုန်းကရော အခုရော သူနဲ့အတူ ရှိနေတယ်လို့ သိလိုက် ရပါတယ်။ ပညာသင်ဆု ရတယ်ဆိုတာကလည်း အကြံဖန် ဇာတ်လမ်း သာ ဖြစ်ပြီး ကောင်လေးကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ခါချင်လို့ သုံးလိုက်တဲ့ ပရိယာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ကင်ဆာရောဂါရှိနေတဲ့ ဖြစ်နေတာကို အမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောပြီး ဘဝ ခရီးလက်ကျန် အတူဆက်လို့ ရပေမယ့် ကောင်လေး နာကျင်မှာကို မလိုလား ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာ အချို့ သူတွေအတွက် အေးအတူ ပူအမျှလို့ ယူဆ ပေမယ့် သူမအတွက်တော့ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကိုတော့ မမျှဝေလိုပါ ဘူး။ သေခွဲခွဲရတာထက် ရှင်ခွဲခွဲခြင်းဟာ အနာသက်သာမယ်လို့ ယူဆတဲ့ သူမ ကတော့ ချစ်သူကို လိမ်လည်ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။ တမလွန်မှာတောင် စုံစည်း နိုင်တယ်ဆိုပြီး အချစ်စွဲစွဲလို့ အတူ သယ်သွားတဲ့ စက္ကူဗူးလေး ကတော့ တစ်ချိန်မှာ မြေမှု့န်ဖြစ်သွားမှာပါ။ သို့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ အမှန်ကို သိလိုက်ရတဲ့ ကောင်လေးရဲ့  နှလုံးသား နာကျင်မှု ကတော့ သေသည့်တိုင် အနာဖြစ်ကျန်ခဲ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်သဝန်လွှာ ကိုဝင်းမျိုးဦး ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့လေးကိုလာလည်တဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…kowinmyooo.blogspot.com
Time in Yangon
ကာလာCode ယူရန် :
ဘယ်သူမဆို...... မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်ခဲ့ရဖူးသော အချစ်ဦးတစ်ယောက်တစ်လေရှိခဲ့ဖူးပါမည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အချစ်ဦးနဲ့လွှဲခဲ့သော်လည်း.............. ဖူးစာကလက်ဆောင်ပေးတဲ့ အချစ်ဆုံးတစ်ယောက်နှင့် ထပ်လို့ဆုံခဲ့လျှင် ပိုမိုမှန်ကန်စွာချစ်တက်လာပါမည် အချစ်သဝန်လွှာ ကိုဝင်းမျိုးဦး အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ တောင်းဆုပြုလျှက် kowinmyooo.blogspot.com
အချစ်စစ် အချစ်မှန်ဆိုတာ မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာပေါင်းစပ်ပျော်ဝင် နေတာကြောင့်... မမြင်ရလည်း အနီးလေးပဲထင်တယ်လေ ဘယ်လောက်ပဲ မိုင်ပေါင်းထောင်ချီ ဝေးလည်း နီးနီးလေးပါပဲ.. ရင်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းပြီး အပျော်စိတ်တွေနဲ့ ကျေနပ်နေတတ်တာ မေတ္တာသက်ဝင်နေတဲ့ ချစ်ခြင်းကရုဏာပဲပေါ့.. သမီးရည်းစား ချစ်သူဘ၀ဆိုတာ အမြဲမျက်စိနဲ့ မြင်တွေ့နေမှ အချစ်ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး နှလုံးသားထဲမှာ ရှိနေဖို့ပဲ လိုတာပါ.. ရင်ထဲအသည်းထဲမှာ အမြဲရှိနေမယ်ဆိုရင် အပြန်အလှန်ထိတွေ့နေရသလို အမှန်အကန်နီးစပ်နေပါတယ် အဲဒါကို.. ချစ်သူလက်ခံတယ် မဟုတ်လား.. အချစ်သဝန်လွှာ ကိုဝင်းမျိုးဦး ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့လေးကိုလာလည်တဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…kowinmyooo.blogspot.com
Welcome To ကိုဝင်းမျိုးဦး လေ့လာစုဆောင်းထားသမျှ ပြန်လည် မျှဝေမည်.....
သင့်ရဲ့ Emai ထားခဲ့ခြင်လျှင်
စောင့်မျှော်နေသူ...♥♥♥ ကဗျာ ချစ်သူ မိုင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲဝေးကွာနေပါစေ ချစ်သူသာ မောင့် ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ အရာရာကိုကျေနပ်နေပါပြီ ချစ်သူ... တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ မောင်တုိ့နှစ်ယောက်နီးစပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အနေဝေးနေတဲ့ မောင်တို့နှစ်ယောက် အတွက် အင်းအားတွေ ဖြစ်နေပါနော် ...ချစ်သူ... အနေနီးနီးဝေးဝေး ချစ်သူနှလုံးသားရဲ့ဘေး မောင့် အချစ်တွေတစ်သက်စာအတွက် စတေးပေးထားတယ်....... မောင့် ဘေးနားမှာ ချစ်သူမရှိသေးရင်လည်း ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ မောင့် အချစ်တွေအေးမသွားပါဘူး... လွမ်းလိုက်တာ ချစ်သူရယ်....... အခုလို လွမ်းနေရတဲ့ နေ့ ရက်ရှည်တွေ အစား မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်သူမျက်နှာလေး မြင်တွေ့ ခွင့်ရမဲ့ နေ့ လေးရောက်ချင်ပြီ... မျှော်လင့်လိုက်ရတာ ချစ်သူရယ်........ မောင်တို့ နှစ်ယောက် အတူတူ ဆုံတွေ့ ခွင့်ရနိုင်မဲ့ နေ့ ရက်လေး ဘယ်အချိန်များရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ပေါ့ ကြောက်နေမိတယ် ချစ်သူရယ်........ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ မောင့်ကို မေ့ပြီးပျော်နေမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ချစ်သူအချစ်တွေပြောင်းလဲသွားမှာကိုလေ သတိရနေပေးပါ ချစ်သူရယ်......... မောင့် အနီးနားမှာ မရှိသေးပေမဲ့ ဟိုးအဝေးတစ်နေရာက ချစ်သူကို လွမ်းနေ သတိရနေရင်း ချစ်သူနဲ့ အတူတူ ဆုံနိုင်ခွင့်ရမဲ့ နေ့ လေးကို မောင် အချိန်တိုင်း စောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့.... ချစ်သူသိနိုင်ပါမလားကွယ်………. အဝေးတစ်နေရာမှ ချစ်နေတဲ့ မောင် အချစ်သဝန်လွှာ ကိုဝင်းမျိုးဦး ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့လေးကိုလာလည်တဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…kowinmyooo.blogspot.com
မမ်မိုရီထဲမှာ တန်ပိုတွေ များလွန်းလို့ ... အလွမ်းတစ်ချို့ကို သော့ခတ်ထားချင်လည်း ... " ... မင်း ဘယ်လောက်ပဲ မူးမူး သတိရခြင်းတွေက လူမမှားဘူး ... " တဲ့ တစ်ညလုံး ပင့်ကူအိမ်ထဲ ခုန်ချလိုက်ပါတယ် ..... ။ Password ထည့်ထားတဲ့ ငါ့မျှော်လင့်ချက်က - * ယုယုယယနဲ့ အတူတကွနေကြမယ့် နေ့လေး * စာရင်း ဇယားနဲ့ အတိကျဖော်ပြရရင် ကတိစကားတစ်ခွန်းကလွဲပြီး သေချာရေရာမှုမရှိသေးတဲ့ နေ့စွဲတစ်ခုပေါ့ ... ရင်ဘက်ထဲက ပြည့်နက်နေလည်း - အိပ်ကပ်ထဲမှာ လေခိုနေတော့ - နံနက်စောစောမှာပဲ နေဝင်ခံခဲ့ရတယ် ..... ။ ဝမ်းမနည်းပါဘူး ... ငါ့ဘက်က သက်သေတွေ သုံညနဲ့ ညီမျှသ၍ - မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ သံသယ ဝင်နိုင်ပါတယ်လေ ..... ချစ်သူ ... အကူအညီလိုတိုင်း ဘုရားသခင်ကို ဖုန်းဆက်ရမှာလား ... ? မင်းနားလည်အောင် စကားထာဖွက်ရရင် - ငါက - ဆုတောင်းခြင်းကို ဘယ်က စရမှန်းမသိခဲ့သူပါ ..... ။ ။
ကိုဝင်းမျိုးဦး. Watermark theme. Powered by Blogger.